दैलेखको घटनाले सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई नै चुनौती दिइरहेका बेला माघ १० गते माओवादी निकट वाईसीएलका कार्यकर्ताले पुनः १० पत्रकारलाई डेकेन्द्र जस्तै बनाउने चेतावनी दिएकाछन् भनी समाचार पढ्दा अचम्म र आश्चर्य लाग्न थालेको छ । आफ्नै सरकार र आफ्नै पार्टिका प्रधानमन्त्री भएका बखतमा पनि माओवादी निकटले यसरी देशको चौथो अंगलाईलाई चुनौती दिनु कहाँको न्याय हो । दमन, शोषण र हत्यालाई नै प्रमुखता मान्दै सरकार चलाउने दुश्साहस गर्ने हो भने पुनः माओवादीलाई अमेरीकाले पहिलाकै स्थान र आफ्नो यथास्थिती सूचीमा राखेर बिचार गर्न पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिंदै दण्डहिनताको चरमबिन्दुमा सरकार फस्दै जानुका कारण सर्वसाधारणले सुरक्षाको लागी विदेश शरणार्थी बनेर हिड्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । एकातिर पत्रकारहरु डेकेन्द्रराज थापालाई न्यायको माग गरिरहेका बेला विपक्षीले आगोमा घिऊ थपिरहेका छन् भने अर्कातिर माओवादीले विपक्षीको आन्दोलनलाई निश्कृय पार्ने निहुमा पत्रकारहरु लाई मार्ने धम्की दिइरहेको छ । यस्तो परिस्थितीको सिर्जना हुनु भनेको पञ्चायतीकाल पूर्वका राणाशासकहरुले देखाएको राजनीति भित्रको रणनीति र जनतामा सोझै दबाबको सिर्जना गर्न खोजेको जस्तै सिलसिला सुरु भएको हो भन्नु गलत हुदैन । पटक पटक स्थानीय पत्रकारहरु क्रान्तीको सिकार भएका छन् । कहिले क्रान्तिको नाममा, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा त कहिले जातजातीको नाममा पत्रकारहरुले आफुलाई बलिदान दिंदै आएको इतिहास हाम्रा सामु छर्लङ्गछ । हत्यारालाई सजाय दिनुको सट्टा, हत्याको पक्षमा सरकारसंग न्याय माग गर्ने माथि नै अर्को नृसंस हत्या हुनसक्ने चेतावनी दिएर पत्रकार जगतलाई नै माओवदीले कुल्चीन त खोजेको होइन ? यदी होइन भने यस्ता मुद्दाको छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाइ पत्रकार र स्थानीय जनतालाई राहत दिने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
आफ्नो दलीय स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पक्ष र विपक्षको नाममा सोझा साझा जनताहरुलाई सडकमा उतार्न तल्लीन राजनीतिक दलहरुको रणनीतिलाई अभिलम्बन अन्त्य गरी देशमा सुसाशन र शान्तीको सिघ्रताका अविलम्बन गरिनु पर्दछ । यस्तै स्थिती रहिरहने हो भने पक्ष र विपक्षको भिडन्त सडकमा जनताहरु उतार्ने वहानावाजी मात्रै हुने छ र आफ्नो पक्षमा कुर्सि सुरक्षीत गराउने कुटिल चाल हुने छ । देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका महिला हिंसा विरुद्धको जागरण, पत्रकारहरुमाथी गरिएको दुव्र्यवहार र हत्याको विरोधमा आन्दोलन, लोडसेडिङ्गका नाममा जनतालाई गुमराह गर्ने सरकारको अर्को नीति, यातायात र सडक सुविधाको नाममा बजेटको अभाव भनि देखाइएको एउटा सुन्दर भाषण, संघीयताको नाममा नेपालीलाई जातजातीबीच लडाइ लडाएर नेपाललाई खण्डित गर्ने सपना र नेपालको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने खालका अभिव्यक्ति, विदेशसंग गरिने अनौपचारीक सम्झौताले नेपाललाई विश्व समुदायको अगाडी टाउको निहुराउनु पर्ने वाध्यता सिर्जना गराउने बहुदलिय प्रजातान्त्रीक गणतन्त्रका अनुयायीहरुको यो दण्डहिनता अब चरमसिमासम्म पुगिसकेको छ भन्नु सार्दभीक नै होला । नेपाल र नेपालीको गौरव गाउँने विश्वले आज अपलेहित नजरहरु नेपालीको स्वाभीमान तर्फ हेर्ने गरेका छन् । यसको प्रतिफल सरकारको लागि लुछाचुँडीमा लागेका राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुले जनतालाई गुमराह गर्दै जानुको कारण नै हो भन्नु गलत पनि हुँदैन ।
स्वतन्त्र पत्रकारीताको न्यायको खोज गर्दै अगाडी बढेका दैलेखका पत्रकारहरुलाई राजनैतिक दलहरुले सरकारसँग झगडाको विजारोपण भएको सोच लिएर त्यहि क्षेत्रबाट सरकार गिराऊ आन्दोलन गर्नु कतै ठीक थिएन । जसले गर्दा पत्रकारहरु पनि राजनीतिक पार्टिका कठपुतलि बनेर सरकार विरोधी क्रान्तिको नाम जोडिन त पुग्दैन भनि सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनता एकातिर, दलहरु अर्कोतिर, प्र.म. र माओवादीदल भिन्दै बोली लगाउँदैछन् भने पत्रकारहरु आफ्नो सुरक्षाको माग गर्दै विस्तापित भएका छन् । यसरी एउटै देशभित्र चारशक्तिहरु चारतिर मुख फर्काउने अवस्थाको सिर्जना हुनु जेठ १४ नै हो । संविधान निर्माणार्थ भएको संविधान सभाको चुनाव विना संविधान गर्भमा नै तुहिन पुग्यो । बुढापाका भन्थे– गर्भमा बच्चा भएको बेला मृत्यु भयो भने त्यस बच्चलाई गर्भबाट ननिकाली दाहसंस्कार गर्नु हुदैन । साँच्चै संविधान पनि संविधानसभाको गर्भमा नै तुहिएको छ तसर्थ संविधानमा सहमति हुन बाँकी बुँदाहरुलाई सहमतिबाट हल गरेर मात्रै पुनः अको चुनावबाट संविधान घोषणा गर्नुपर्दछ नत्र पाप लाग्ने छ । जनताका आशा निराशा बन्ने पाप, राष्ट्रलाई खण्डित तुल्याउन हेतु जातिय सद्भाव खलबलाउने पाप, देशका स्वभीमानी पत्रकारहरुलाई पैदालाले कुल्चन खोज्ने पाप, मानवताको अवमुल्य गर्ने पाप, देशलाई द्वन्द्वतिर लैजाने पाप, राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथी विदेशीले औंला उठाउने समयको आगमन गराउने पाप...... ।
सरकारले ज्ञानेन्द्रनीति लिएका कारण विपक्षीदलहरुले क्रान्तिकारी नीति लिन खोज्दैछन् तर जनताहरु भने, जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने उखानको रट लगाएर तमासा हेर्दैछन् । बुझ्नु पर्ने तथ्य कुरा के भने, जनताले पार्टीका पक्ष र विपक्षका लागि धेरै लडाइ लडी सके । कहिले पञ्चे ढाल्न, कहिले निर्दलीय व्यवस्था ढाल्न र, कहिले रोलवाला राजालाई ढाल्न । तर, कुनै पनि क्रान्तिको परिवर्तनपछि जनताका लागि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएन । समस्या उहि राणाकालिन नै छन् । नेताहरुलाई र सरकारमा बस्नेहरुलाई त पूर्वकालमा पनि लोकतन्त्र आएकै थियो । लोकतन्त्र आएपछि सुख हुन्छ, चैन हुन्छ, काम, माम र दाम पाइन्छ भन्ने कथन जनताको लागि कहिल्यै सिद्ध भएन तर नेतातन्त्रहरुका भागमा संधै लोकतन्त्र र गणतन्त्र आइनै रहेको छ । मुस्ताङे गाडी चढ्ने बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएयता देशका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्दा चार्टर गरिएका हेलिकप्टर र विमानको रकम नै ३ करोडको हाराहारी पुगेको देखिन्छ । ४४ घण्टाभन्दा बढी आकाशमा उडेका प्र.म. बाबुराम जंगलमा आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई के भनेर लडाइमा होमेका थिए त्यो पनि विर्सेछन् । राष्ट्रपति एकपटक विदेश भ्रमण जाँदा भ्रमण खर्च भनि डेढ करोड छुट्टयाउँछन् । यस्तै तरिकाले अन्य मन्त्रीहरुको पनि आ–आफ्नै तरिकाले देशको ढुकुटी खर्च गर्ने माध्यमहरु होलान् । विदेशी सहयोग अर्थमन्त्रालयमा थन्केर खर्च गर्ने ठाउँ कुरिबस्छ । देशमा विकासको अभावले सड्क, विजुली र खानेपानी जस्ता दैनिक उपभोग्य क्षेत्रहरु तहस नहस भएकाछन् । सरकारी कर्मचारीहरु दिन कसरी बिताउने भनि जाडोमा घाम तापिर हन्छन् तर जनताका दुःख सुन्ने फुर्सद छैन । वित्तिय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह गर्ने नाममा अनेक बहानाबाजी गरेर आफन्तलाई मात्र ऋण प्रवाह गर्छ तर साधारण व्यापारमा लागेका व्यापारीहरुसंग दैनिक वचतको नाममा पैसा असुल गरिरहन्छ । यस्तै यस्तै यो देशमा भइरहेको छ । यस्तै यस्तै गरी यो देश उँधोगतितिर लम्किरहेको छ । स्वस्च्छ छवि र विचार भएका देशभक्तहरुलाई अनेक लान्छना र मुद्धा लगाइ कानुनको दायरामा ल्याउँछ तर देशको बागडोर समातेर बसेको सरकार प्रमुखले दिन दाहाडै गोली चलाउने आदेश दिन्छ अनि अपराधीलाई छुटकारा दिने तर्क राख्दै जनतालाई मन्त्र सुनाउँछ ।
न त यहाँ जनताले विपक्षीको साथ दिन्छन्, न त सरकारको साथ दिन्छन् । पहिला पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार भएकै थियो तर केही लछारपाटो लगाउन सकेनन् । अहिले पनि नयाँ नेपालको नारा बोकेर आएको माओवादी थियो उ पनि न्याय माग्ने न्यायप्रेमीलाई मार्ने धम्की बोल्दै हिड्छ भने जनता केका लागि पछि लाग्ने ? अब राजनीतिक दल र तिनलाई सरकारमा बसाउनको लागि होइन कि अब युवा जमातले आफ्नो लागि लडाइ लड्नु पर्छ । राजनीतिक दलका लागि धेरै लडिसकेका जनताहरुको दुःख, पिर, मर्का ज्यूँका त्यूँ छन् भन्दा पनि अझै खस्कीएका छन् भने अब फेरी त्यही प्र.म.को कुर्सिका लागि तिनै दलहरुलाई साथ दिन किन आफ्नो छाति खोलेर अगाडी बढ्ने ? त्यसको सट्टा देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनको लागि सम्पूर्ण जनता र युवाहरु एककृत भइ सरकार र दल विरुद्धमा क्रान्ति छेड्ने हो भने के होला ? अबका दिन पनि यसै गरी पार्टिको पक्षपोषण गर्दै जनता लडाइका सिपाही बन्दै जाने हो भने यो देश कहिल्यै पनि नेपाली जनताका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको देश हुन सक्दैन ।
माओवादीले आफ्नो नीतिलाई युद्धकालिन नाराहरु सरह सञ्चालन गर्ने हो भने जनतालाई अन्य कुनै पार्टि विशेषका पछाडी हिड्ने मनशाय पक्कै पनि छैन होला । तर, भर्खरैको एक मुद्धा डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरुलाई बचाउने अभिप्राय देखाउने प्र.म. र न्याय माग्दै हिडेका थप १० पत्रकारहरुलाइ पनि डेकेन्द्रकै हालत पु¥याउने ठाडेा हाँक दिने माओवादी निकटलाई समर्थन गर्नु साँच्ची नै पूर्खाको भाषामा राँडीको राज्य भने जस्तै भएको छ । निकट भविष्यमा आफ्नो छविलाई अझ नधमिल्याउने हो भने अति छिटो माओवादीले आपूmलाई सहि गोरेटोमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । जसले गर्दा भोलीका अन्य पार्टिहरुको सरकार स्थापना पश्चात माओवादीले आफुलाई विस्तारै विस्तारै जनताको मुटु बनाउन सफल हुनेछ ।